Kungenzeka yini ukugcina ubuhlobo obunobungane ne-ex yakho? | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 26/04/2021 22:00 | Ubudlelwano
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi ngemuva kokwehlukana, Kungenzeka ukuthi uqhubeke nobungani obuhle nabangaphambili. Kunokungabaza okuningi lowo muntu okukhulunywa ngaye angaba nakho futhi ngukuthi yize kuyisimo esijwayelekile futhi esivame ukwenzeka, kunzima ukugcina ubudlelwano bobungani nomuntu obeseyizithandani isikhashana.
Kungenzeka ukuthi ubungani obuhle bakheka, kodwa ochwepheshe kule ndaba bayeluleka ukugcina ibanga ne-ex ukugwema izinkinga ezingaba khona.
1 Ubungane ne-ex yakho
2 Kungenzeka yini ukugcina ubungane ne-ex yakho?
3 Okufanele ukwenze uma kuvela ukungabaza
Ubungane ne-ex yakho
Lapho umbhangqwana uhlukana, kungaba nezimo ezimbili ezihluke kakhulu: ukuphela kabi nokungafuni ukwazi ngomunye nomunye unomphela noma kugcina ngendlela enobungane nokwakha ubudlelwano obuhle babangane. Kuyiqiniso ukuthi ezimweni eziningi, kuyaqabukela ukuqhubeka nobudlelwano ne-ex kwazise umuntu ngamunye unquma ukushiya okwedlule futhi aqale impilo entsha. Ngokuhamba kwesikhathi, noma ngabe izinhloso zizinhle, kungavela uchungechunge lwemizwa ebuthikameza ngokuphelele ubudlelwano obushiwo ngenhla.
Kungenzeka yini ukugcina ubungane ne-ex yakho?
Into ebaluleke kakhulu ukushiya ubudlelwano nomlingani ophukile bese uzama ukwakha impilo futhi. Yize iqiniso lokuthi ukuqhuma okunjalo kuphele ngendlela engcono kakhulu, kuhle ukuhamba ukuze amanxeba aphole ngokuphelele futhi aphole unomphela. Kungenzeka futhi kunengozi yokuthi emuva kwalobu budlelwano bobungani, okufunwayo ukubuyela kuzithandani futhi.
Kungakho ochwepheshe beluleka ngaso sonke isikhathi ukuthi bacabangisise ngakho konke okudingekayo ngaphambi kokuthatha isinqumo. TO Ukusuka lapha, kuyindaba yababili ukwakha ubudlelwano obunobungane noma ukukhetha ukulibala ngokuphelele.
Okufanele ukwenze uma kuvela ukungabaza
Ngisho noma enye ingxenye yombhangqwana ifisa ukugcina ubuhlobo obuthile bobungani, ukhululekile ukwenqaba okunjalo. Uma ungayiboni kahle, kuhle ukuhlala phansi nomlingani wakho umenze aqonde ukuthi akuwona umqondo omuhle lowo. Kungenzeka ukuthi ukugcina ubungani obuthile kungenza izinto zibe zimbi kakhulu.
Kubalulekile ukuchitha isikhathi nawe futhi uzame ukuhlangana nabantu abasha ukugwema ukubuyela emuva kokwedlule. Akukuhle futhi akululeki ukuthi uzimiselele esikhathini esedlule futhi ungalahli isisindo. Kunconywa ukuthi udabule inqubo yosizi yokwehlukana bese uqala phansi.
Khumbula ukuthi ukuba abangane akufani nokugcina ubuhlobo obuhle. Akukho okwenzekayo ukuphela ngendlela enobungane ubuhlobo obuthile bese usuka lapha, shiya okwedlule ngemuva futhi ukwazi ukuqhubeka nokuphila ngaphandle kwenkinga.
Ngamafuphi, Kunzima kakhulu futhi kunzima ukuba ngumngane we-ex yakho. Ezimweni eziningi kakhulu, abantu abaqeda ubudlelwano, bakhetha ukukwenza ngendlela enokuthula bakhohlwe noma yiluphi uhlobo lwemizwa ukuze bakwazi ukwakha impilo yabo ngaphandle kwenkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Kungenzeka yini ukugcina ubuhlobo obunobungane ne-ex yakho?